China Gịnị bụ teknuzu ukpuru nke LED mgbidi washer? ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | REIDZ
Gịnị bụ ụkpụrụ teknuzu nke washer windo LED?
N’oge na-adịbeghị anya, a na-eji igwe eji agbanye ọkụ n’ụlọ LED n’ebe nile, dị ka ọkụ ụlọ nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, ọkụ ụlọ, ọkụ nke ụlọ ndị mere ihe akụkọ, ebe ntụrụndụ, wdg; na nso abuana na-abawanye Wider. Site na mbụ ime ụlọ ruo n'èzí, site na ọkụ elekere mbụ ruo na ọkụ a na-ahụ ugbu a, ọ bụ mmelite na mmepe nke ọkwa ahụ. Ka oge ahụ na-aga n’ihu, ndị na-asacha mgbidi LED ga-etolite n’ime akụkụ dị mkpa nke ọrụ ọkụ ahụ.
1. basickpụrụ puru iche nke akwa akwa LED nwere bekee
Enwere ike ekesa voltaji igwe eji eserese mgbidi LED n'ime: 220V, 110V, 36V, 24V, 12V, ọtụtụ ụdị, yabụ anyị na-elebara voltaji kwekọrọ na mgbe ị na-ahọrọ ike ọkọnọ.
1,2. larịị nchedo
Nke a bụ usoro dị mkpa nke washer mgbidi, ọ bụkwa akara dị mkpa na-emetụta ogo nke tuberail nche ugbu a. Anyị ga-eme ihe siri ike chọrọ. Mgbe anyị jiri ya pụọ, ọ kachasị mma ka ọkwa mkpuchi mmiri ghara ịdị elu karịa IP65. A choro inwe nguzogide nrụgide dị mkpa, nguzogide chipping, nguzogide elu na ala dị ala, nguzogide ọkụ, mmetụta nkwụghachi na ọkwa IP65, 6 pụtara igbochi uzuzu ịbanye; Ihe putara bu: iji mmiri sachaa onwe gi, n’enweghi nsogbu.
1.3. okpomọkụ na-arụ ọrụ
Ebe ọ bụ na a na-ejikarị azụ ụlọ ndị dị n'èzí karịa, paramita a dị mkpa karị, ihe ndị achọrọ maka ọnọdụ okpomọkụ dị elu. Na mkpokọta, anyị chọrọ ikuku n'èzí na -40 ℃ + 60, nke nwere ike ịrụ ọrụ. Ma a na-eji alụmịl na -eme mgbidi mee ya ka ọ dị mma iji kpo oku karịa, yabụ ihe ndị na-ahụ maka mgbidi nwere ike gboo ihe a chọrọ.
1.4 akụkụ ọkụ na-emitting
Igwe-ọkụ na-acha ọkụ na-adịkarị warara (ihe dịka ogo 20), ọkara (ihe dịka ogo 50), na obosara (ihe dịka ogo 120). Ka ọ dị ugbu a, ụzọ tere aka kachasị dị anya nke ebe a na-asacha mgbidi dị elu (akụkụ dị warara) bụ mita iri- 50 na
1.5. Onu ogugu nke oriọna oriọna
Onu ogugu nke LEDs maka igwe eji ese mgbidi odi elu bu 9 / 300mm, 18 / 600mm, 27 / 900mm, 36 / 1000mm, 36 / 1200mm.
1,6. nkọwa agba
Agba 2, ngalaba 6, ngalaba 4, akụkụ 8 zuru oke, agba agba, acha ọbara ọbara, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, odo odo, ọcha na agba ndị ọzọ
oghere iko nke na-egosipụta, nnyefe ọkụ dị 98-98%, ọ bụghị mfe ọfụma, nwere ike iguzogide radieshon UV
1.8. Usoro njikwa
Enwere ugbua ụzọ abụọ maka njikwa igwe ọkụ nke LED: njikwa n'ime na njikwa mpụga. Nchịkwa esịtidem pụtara na enweghị njikwa mpụga adịghị. Onye rụrụ ya chepụtara sistemụ nchịkwa na oriọna mgbidi, ogo ya enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Njikwa mpụga bụ ihe njikwa mpụga, enwere ike ịgbanwe nsonaazụ ya site na idozi bọtịnụ nke njikwa isi. Na-abụkarị na nnukwu ọrụ, ndị ahịa nwere ike ịgbanwe nsonaazụ na ihe ha chọrọ, anyị niile na-eji ngwọta nchịkwa mpụga. Enwekwara ọtụtụ ndị na-asa mgbidi na-akwado sistemụ nchịkwa DMX512.
Na mkpokọta, ejiri 1W na 3W LEDs dị ka isi mmalite ọkụ. Agbanyeghị, n'ihi teknụzụ na-eme ngwa ngwa, ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji 1W na ahịa ugbu a, n'ihi na 3W na-ewepụta oke ọkụ, ọkụ ahụ na-ere ngwa ngwa mgbe ihichapụ ikpo ọkụ. Ekwesịrị ịtụle ụdị ihe ndị a dị n'elu mgbe anyị na-ahọrọ igwe nhicha mgbidi dị elu. Iji kesaa ọkụ nke ikuku butere LED nke ugboro abụọ iji belata ọkụ ma mee ka ìhè ahụ ka ọ dị mma, ụdọ LED ọ bụla nke asacha mgbidi ga-enwe oghere arụmọrụ dị elu nke PMMA.
2. workingkpụrụ ịrụ ọrụ nke washer windo LED
Igwe eji eserese mgbidi LED dị obere n'ogo ma dị mma n'ihe gbasara ikpo ọkụ, yabụ na -ebelata ihe isi ike na imebe ya, mana na ngwa ndị bara uru, ọ ga-apụta na ịkwọ ụgbọala ugbu a adịghị mma nke ukwuu, yana ọtụtụ mbibi dị na ya. . Yabụ otu esi eme ka ịsa ahụ mgbidi rụọ ọrụ nke ọma, ihe a na-elekwasị anya bụ njikwa na ịkwọ ụgbọala, njikwa na ịnya ụgbọ ala, mgbe ahụ anyị ga-ewere onye ọ bụla ịmụ.
2,1. Ihe eji emegharia LED ugbu a
Mgbe a bịara ngwaahịa ngwaahịa ike dị elu nke LED, anyị niile ga-ekwu maka mbanye oge niile. Gịnị bụ ikansi mgbe niile ugbu a? Na agbanyeghị nha nke ibu ahụ, a na-akpọ sekit nke na --eme ka ọ dị ugbu a nke LED na - akwọ ụgbọ ala mgbe niile. Ọ bụrụ na-eji 1W ikanam na igwe nhicha mgbidi, anyị na-ejikarị 350MA ikanam LED mgbe niile. Ebumnuche nke iji kọmpụta LED ugbu a bụ iji melite ndụ na ìhè nke LED. Nhọrọ nke ihe dị ugbu a na-adabere na arụmọrụ ya na nkwụsi ike ya. Ana m agbalị ịhọrọ isi iyi dị ugbu a na arụmọrụ dị elu dịka o kwere omume, nke nwere ike belata ike ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ.
2,2. ihe a na-eji mmiri eduga na mgbidi
Oge ihe eji eme ihe na ihe mmebi nke igwe asacha ihe eji amata odizi bu nke microchip wuru. Na ngwa injinịa, enwere ike iji ya na-enweghị onye njikwa, wee nwee ike nweta mgbanwe mgbanwe, ima elu, flashing agba, flashing random, na mgbanwe nwayọ. Mmetụta dị omimi dịka ntụgharị ọzọ nwekwara ike ịbụ DMX na-achịkwa iji nweta nsonaazụ ndị dị ka ịchụ na nyocha.
2,3. Ebe ntinye
Ngwa: Singlọ a na-alụbeghị di, ọkụ nke mpụga nke ụlọ akụkọ ihe mere eme. N'ime ụlọ ahụ, a na-enye ọkụ site na mpụga na ọkụ ime ụlọ dị n'ime. Ewu ọkụ na-enwu n'okirikiri ahịhịa, asacha mgbidi na akwụkwọ ahụaja na bọlbụ. Ọkụ pụrụ iche maka akụrụngwa ọgwụ na nke ọdịnala. Ikuku ikuku dị na ntụrụndụ dịka ụlọ mmanya, ụlọ ịgba egwu, wdg.